Kalandrie 5, safidy iray hafa mihoatra ny sahaza ny kalandrie iOS | Vaovao IPhone
Ny rindranasa kalandrie dia iray amin'ireo be indrindra ao amin'ny App Store, fa mitadiava rindranasa izay manome zavatra hafa noho izay efa natolotranao Kalandrie IOS, ny fampiharana azy eo an-toerana, ary noho izany mendrika ny fandoavana izany dia zavatra tena hafa. Nandritra ny fotoana ela dia nampiasa Fantastical aho, fampiharana ho an'ny iPhone sy Mac OS X, fa ny tsy fisian'ny kinova namboarina tamin'ny efijery an'ny iPad nataonay dia nitohy ny fikarohana nataoko. Calendars 5, ny fampiharana alimanaka vaovao avy amin'ny Readdle mahafeno ny zavatra rehetra angatahiko fangatahana karazana ity, ary iraisan'ny rehetra, ka tapitra ny fikarohako izao.
Toa sarotra ny manatsara ny fampiharana kalandrie izay mahatonga azy io ho tsara kokoa noho ny ambiny. Mifanaraka amin'ny Google sy iCloud, fomba fijery samihafa (andro, herinandro, volana, taona), famantarana ny kalandrie samihafa misy loko ... fampiharana am-polony maro no ao anatin'izany. Ny tetiandro 5 dia manana zavatra hafa, ary izany no izy dia fampiharana izay mifantoka amin'ny hetsika. Aza adino ny fanelingelenana, ireo singa hafa tsy ilaina ilaina, ny zava-dehibe dia izay nataonao fandaharana, ary izany no fampisehoan'ny fampiharana azy. Ankoatr'izay, ny fampidirana hetsika vaovao dia tena tsotra, manorata amin'ny fiteny voajanahary, toy ny hoe manisa azy ianao, ary ho hitan'ny Alimanaka ny daty sy ny fotoanan'ny lohahevitra ary hametraka azy ireo.
Ny fampiharana dia azo alamina tanteraka: apetraho ny andro tianao hanombohan'ny herinandro, ny efijery inona no tianao aseho azy rehefa manokatra ny rindranasa ianao, rahoviana no hikirakira ny fampahatsiahivana default, inona ny kalandrie misy anao ... Amin'izany rehetra izany, haingana ny fampidirana hetsika, tsy misy mila manome dingana mihoatra ny roa, nefa tsy mila mivezivezy amin'ny menus tsy misy farany.
Kalandrie 5 plus dia fampiharana fampiharana izay mifanaraka amin'ny iOS Reminders. Fa maninona no misy fampiharana roa ho an'ny asa roa mifandray akaiky? Ho fanampin'izany, ny manampy asa dia mora kokoa hatramin'ny fanavaozana farany, tsy mila mizotra mankany amin'ny kiheba "Tasks" akory ianao amin'izany: tsindrio ny add ary kitiho ny habaka alohan'ny hanoratana zavatra, hampiditra mivantana izay soratanao nitohy toy ny enti-mody.
Ny fanavaozana farany dia manampy koa ny fahaizana asehoy ny daty ankehitriny ho toy ny "badge" eo amin'ny kisary. Tahaka ny zava-drehetra amin'ity rindranasa ity dia azo alamina izany, ary azonao atao ny manamarina fa tsy misy badge, izay manondro ny zava-nitranga na ny daty, izay tianao rehetra.
Satria sarotra ny hahatratra ny tonga lafatra Azontsika atao ny mangataka amin'ny Calendars 5 zavatra hafa bebe kokoa, toy ny hoe adika amin'ny teny espaniola, na hoe afaka mamorona modely hetsika ianao. Noho io antony io dia tsy omeko azy ny naoty avo indrindra (mitaky izahay, fantatrao), fa tonga amin'ny iPad-ko hijanona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Calendars 5, safidy iray hafa mihoatra ny sahaza ny kalandrie iOS
sabatra dia hoy izy:
mpiambina maro no ataonao… .. Miala sasatra! :-p. Fampiharana tsara ...
Mamaly an'i dagafo
Ka tsy hampianariko anao ny volana fahavaratra ... HAHAHA 😛
Ary ahoana raha tsy manana Mac ianao? Hitsahatra tsy afaka miditra hetsika ao amin'ny PC ve izany?
Tsia, raha manana ny kalandrie Windows namboarina handrindra amin'ny iCloud ianao, ny zavatra rehetra dia hifangaro tanteraka.
Astundra dia hoy izy:
Nametraka hetsika tamin'ny iPhone aho ary tsy nifangaro tao amin'ny ipad-ko
Valiny tamin'i Astundra
Hamarino tsara fa manana ny kalandrie ao amin'ny iCloud ianao ary mitovy ny kaonty ao amin'ny iPhone
Ho ahy dia fampiharana saika tonga lafatra izy io, saingy hitako ao amin'ny tessitura fa tsy haiko raha azo apetraka amin'ny imac ihany koa ity rindranasa ity, satria raha izany amiko dia tonga lafatra.
apicatoste dia hoy izy:
Tonga lafatra ny zava-drehetra raha tsy hoe tsy azoko atao ny mampifandray azy raha tsy manokatra azy aho (tsy toy ny Kalandrie Google, izay amin'ny alàlan'ny Gmail Push, manavao na dia tsy manokatra ilay rindranasa aza aho, noho izany dia mandeha ny fampandrenesana. Miaraka amin'ny Kalandrie, raha tsy manokatra app aho dia tsy manavao zavatra)
Valiny amin'ny apicatoste